မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (ဌ) ရပ်ကွက်ရှိ မနောသုခကျောင်းတိုက်တွင် စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက ကပ္ပိယတစ်ဦးအား ဓားဖြင့်ထိုးသတ်မှုဖြစ်ပွား
စကားပြော အဆင်မပြေရာမှ ၀ါတော် နှစ်ဝါ ရှိသည့် ဦးရာဇိန္တ (ခေါ်) ဦးလှထွန်း အသက် ၄၆ နှစ်က ၅၄ နှစ် အရွယ် ကပ္ပိယ ဦးရွှေမြအား ဓားဖြင့်ထိုးခဲ့ရာ ၀မ်းဗိုက်၊ လည်ပင်းတို့၌ ဒဏ်ရာများရရှိပြီး သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဓားဖြင့်ထိုးသည့် ဦးရာဇိန္တ (ခေါ်) ဦးလှထွန်းအား ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ (၃၀၂) ဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ထားပြီး မြောက်ဥက္ကလာပမြို့မရဲစခန်းတွင် ချုပ်ထားပြီး ရဲလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ဝေဘာဂီနယ်မြေရဲစခန်းမှ တာဝန်ကျရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
တာဝန်ကျရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက " ဖြစ်တာက (ဌ) ရပ်ကွက်၊ ပုလဲသွယ်လမ်းရှိ မနောသုခကျောင်းတိုက်မှာ ဖြစ်တာပါ။ တိုင်ကြားလာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သတင်းကြားလို့ သွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ တရားခံကနေ သေဆုံးသူကို ဓားနဲ့ထိုးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တွေ့လို့မို့ အရေးယူဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နယ်မြေစခန်းမှာ ချုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတာကြောင့် မြို့မစခန်းမှာ ရဲလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေစဉ်အတောအတွင်းမှာ ခဏချုပ်ထားတာပါ။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ (၃၀၂) နဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ ဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းက စကားများရန်ဖြစ်ပြီးတော့ ဖြစ်သွားကြတာ။ ပြောပြချက်အရပေါ့လေ" ဟု ပြောကြားသည်။
Posted by ၇ဲလတ် at 04:40 No comments :
တစ်ချို့လူတွေက ပြောပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာ အရွယ်အစားက အရေးမကြီးပါဘူးတဲ့။
တစ်ကယ့် လက်တွေ့ မှာတော့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အရပ်ပုတဲ့အမျိုးသားတွေကို သဘောကျလေ့မရှိကြပါဘူး။ အရပ်ရှည်တဲ့အမျိုးသားတွေဟာ အရပ်ပုတဲ့ အမျိုးသားတွေ ထက် ချစ်တင်းနှောမယ့် လက်တွဲဖော် ပိုများနေတာကို လေ့လာမှု တစ်ခုက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Posted by ၇ဲလတ် at 04:38 No comments :
သန်လျင်မြို့နယ်၌် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးကို ဓားဖြင့် ခုတ်သတ်ခဲ့သူအား အောက်တိုဘာ ၇ ရက်တွင် စတင်ရုံးထုတ်မည်ဖြစ်ပြီး တရားလိုအား စစ်ဆေးမည်
တရားခံတင်မြင့်အနေဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလတွင် သန်လျင်မြို့နယ်၌ပင် အမျိုးသားတစ်ဦးအား ဓားဖြင့်ထိုးကာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုကြောင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာတွင် တရားခံပြေးအဖြစ် ကြေငြာထားခံရပြီး စက်တင်ဘာ ၂ ရက်တွင် ၎င်းတိမ်းရှောင်နေသည့် သန်လျင်မြို့နယ်၊ ဘုရားကုန်းကျေးရွာရှိ သဘာဝတည်းခိုခန်း၌ ရှိနေစဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီးရာ ဓားဖြင့်ပြန်လည် ခုခံထိုးသတ်ခဲ့သဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့နှစ်ဦးဖြစ်သည့် ရဲအုပ်အောင်နိုင်နှင့် တပ်ကြပ်သူရလွင်တို့ သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ဒီလူက ဒုစရိုက်မှုတွေ အများကြီးကို ကျူးလွန်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ လူသတ်မှုနဲ့ ထောင်ကျပြီး ၂၀၀၈ခုနှစ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ ပြန်လွတ်လာတယ်။ လွတ်လာပြန်တော့လည်း ပြစ်မှုတွေ ထပ်ကျူးလွန်တယ်။ မုဒိမ်းမှုတွေ၊ လုယက်မှုတွေနဲ့ ဒုစရိုက်မှုပေါင်းများစွာကိုလည်း ထပ်မံကျူးလွန်လို့ ထောင်ကျခဲ့တယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ သမ္မတလွတ်ငြိမ်းခွင့်နဲ့ ပဲ ပြန်လွတ်လာတယ်။ အဲဒီလိုလွတ်ပြီး အခုလိုပြစ်မှုကို ထပ်မံကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တောင်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးရှိ အမည်မဖော်လိုသူ ရဲအရာရှိတစ်ဦး က ဆိုသည်။
Posted by ၇ဲလတ် at 04:37 No comments :
သေသွားတဲ့ကြောင်ကို ဒရုန်းလေယာဉ်အဖြစ် ပြောင်းခဲ့တဲ့သူက ယခုအခါ နွားရဟတ်ယာဉ် လုပ်ဖို့စီစဉ်နေ
Bart Jansen ဆိုတာ ဒတ်ခ်ျလူမျိုးအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သိပ်မကြာသေးခင်က သေသွားတဲ့ သူ့ ကြောင်ရဲ့ အတွင်းကလီစာတွေကို ထုတ်ပြီး ကြောင်ဒရုန်းလေယာဉ်လုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ရီမုတ်ကွန်ထရိုးကြောင်သေဟာ Janses တီထွင်နိုင်စွမ်းရဲ့ အမြည်းသဘောမျိုးသာဖြစ်သေးပြီး အခုအခါမှာ သူဟာ ပိုမိုကြီးမားပြီး ပိုမိုက်တဲ့ ထူးဆန်းထွေလာတီထွင်မှုတစ်ခုနဲ့ ပြန်လာပါပြီ။ ဒါကတော့ နွားဟယ်လီ ကော်ပတာဖြစ်ပါတယ်။ နွားသေကနေ လုပ်မယ့် ရဟတ်ယာဉ်ပါတဲ့။
Jansen ဟာ သူ့ ရဲ့ သူငယ်ချင်း၊ အင်ဂျင်နီယာ Arjen Beltman ရဲ့ အကူအညီကို ရယူပြီး၊ သူတို့ နှစ်ဦးစားဟာ လူတ်စယောက်စီးနင်းလိုက်ပါနိုင်တဲ့ တိရိစ္ဆာန်အကောင်ကြီးတစ်ကောင်ပုံစံ လေယာဉ်ကို တီထွင်ဖို့လုပ်ဆောင်နေကြပါ တယ်။ “ နွားဆိုရင်တော့ လူတစ်ယောက်ဆန့် မှာပဲ။ ဒါကြောင့် နွားကလည်း ရွေးစရာအကောင်တွေထဲက တစ်ကောင်ပဲ။ တကယ်တမ်းလည်း ကျွန်တော်တို့ နွားကိုပဲ သုံးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်” လို့ Jansen က Business Insider ၀က်ဘ်ဆိုဒ်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တုန်းက၊ Jansen ဟာ သူ့ ရဲ့ အိမ်မွေးကြောင်လေး Orville သေဆုံးသွားပြီးနောက် ကြောင်သေ ကို ရေခဲသေတ္တာထဲ ခြောက်လကြာ ထည့်သိမ်းကာ၊ Orville ရဲ့ ကိုယ်ထဲ စက်တွေ ထည့်တပ်ကာ၊ ခြေလက် လေးချောင်းစီ မှာ ဒလက်လေးခုလေး တပ်ပြီး ကြောင်သေကို ပျံအောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by ၇ဲလတ် at 04:36 No comments :
Facebook ကနေပြီးတော့ နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်းတဲ့ ပြောင်းလဲမှု
Facebook ကနေပြီးတော့ နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်းတဲ့ ပြောင်းလဲမှု တစ်မျိုးကို mobile အသုံးပြု သူတွေ အတွက် စတင်နေပြီး iOS မှာစတင် ရရှိနေ ပါပြီ။ ဒါကတော့ Facebook iOS app ကနေပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ profile picture ကိုအဆုံးမရှိ လည်နေတဲ့ GIF ပုံစံ video clip (looping video clip) တွေ တင်လို့ ရသွားတာ ပါပဲ။ အဲဒီ လိုပြောင်းဖို့ အတွက်
1 - iOS မှာ Facebook app ကိုဖွင့်ပါ။
2 - ကိုယ့်ရဲ့ Profile page ကိုသွားပြီး ကိုယ့်ရဲ့ profile picture ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
“TakeaNew Profile Video” ဒါမှမပာုတ် “Upload Video or Photo” ဆိုတာကို ရွေးပါ။ အဲဒါတွေကို မတွေ့သေး ဘူးဆိုရင်တော့ သင်ပာာ update မရသေးတာပါ။ “Coming Soon” ဆိုတာလေး ပေါ်နေ ပါလိမ့်မယ်။
3 - ပြီးရင် သင့် video ကို record လုပ်ပါ။ video lenght ကိုတော့ ၇ seconds သက်မှတ်ထား ပါတယ်။
ခုချိန် ထိတော့ ဒီ update ပာာ iOS အသုံးပြုသူ တွေအတွက်ပဲ ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အားလုံး အတွက် ထွက်ရှိ လာမှာပါ။ သင်ဒီ update ကို ရ မရ သိဖို့ ကတော့ စမ်းသပ် ကြည့်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပြီး တစ်ကယ်လို့ ပြောင်းလို့ ရတယ် ဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်ဖုန်းသုံး သူမဆို desktop သုံးသူမဆို မြင်နုိုင်မှာပါ။
Posted by ၇ဲလတ် at 04:35 No comments :
အောက်ဖော်ပြပါ Buttons များမှတဆင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၇ဲ့Twitter စာမျက်နှာ နှင့်ကျွှန်တော့် Facebook စာမျက်နှာများသို့ သွှားေ၇ာက်နိုင်ပါတယ်
MIC မှ ဟိုတယ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသော ကျွန်းဖီလာကျွန်းမှာ လန်ပိကျွန်း အမျိုးသား အဏ္ဏ၀ါဥယျာဉ်တွင် ပါဝင်နေ
လန်ပိကျွန်းသို့ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများ လာရောက် အပန်းဖြေနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ဇော်မိုးဦး) တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး၊ ကော့သောင်းခရိုင်တွ...
မြန်မာ့လေကြောင်းပိုင် လေယာဉ် ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ပျက်ကျခဲ့
မြန်မာနိုင်ငံ ​ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ​မနေ့က ​ခရီးသည် ​၅၅ ​ဦးတင်ဆောင်လာတဲ့ ​လေယဉ်တစီးဟာ ​အရှိန်လွန်ပြီး ​လေယဉ်ပြေးလမ်းမပေါ်ကနေ ​ခြံစီးရိုးတွေကို...
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တွင်း စားသောက်ဆိုင် အမည်ခံ အနှိပ်ခန်း၊ ကာရာအိုကေခန်းများ၌ လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းများကိုပါ လုပ်ကိုင်လာခြင်းကြောင်...
မင်္ဂလာဆောင်အကြိုညတွင် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားကာ သတို့သားအဖမ်းခံရခြင်းကြောင့် မင်္ဂလာပွဲကို သတို့သမီး တစ်ဦး တည်း ကျင်းပခဲ့ရသည့်ဖြစ်ရပ် မေ ၂၂ ရ...
ဆုပန်ထွာရဲ့ သတို့သား ကိုဥက္ကာကျော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဝေဖန်မှုတွေ
ဆုပန်ထွာရဲ့ သတို့သား ကိုဥက္ကာကျော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဝေဖန်မှုတွေ အများ ကြီး ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် သဇင်နဲ့ လည်း ဘာဘာညာညာ ဆ...
၀င်ငွေခွန်၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စသည့် ပြည်သူများ လိုက်နာနိုင်မှု မရှိသည့် အခွန်များအား အသစ်ပြန်လည် ပြဋ္ဌာန်းမည်
၀င်ငွေခွန်၊ ကုန်သွယ်ခွန် စသည့် ပြည်သူများ လိုက်နာနိုင်မှု မရှိသည့် အခွန်စည်းကြပ်များအား ပြည်သူများ လိုက်နာနိုင်သည့် အနေအထားအထိ ရောက်ရှ...
မမများ အတွက် အချစ်ဗေဒင် (အမျိုးသမီး သီသန့်)
မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဆန်း နည်းလေးပါ။ မိန်းခလေးတွေအတွက် သီးသန့်ပါ။ အရွယ်ရောက်တဲ့ မိန်းခလေးတွေ ကအစ အရွယ်လွန်အပျိုကြီးတွေ တခါတရံ တခုလပ် အိမ်ထောင...
Sexy မော်ဒယ်လောကကြီးကို လတ်တလော ဦးဆောင်နေသော ဇွန်သဉ္ဖာ အကြောင်း
ဇွန်သဉ္ဖာက မှော်ဘီ GTC ကနေ B.E ရော M.E ပါဘွဲ့များပါ ရယူခဲ့ပြီးမှ မော်ဒယ်လ် လောကကို ၀င်ရောက်လာသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်တင်ကျလွန်းတဲ့ Sexy ဓာ...
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ အောက်တိုဘာလတွင် ဘီဘီစီမှ တင်လိုက်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ မြေပုံနှင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ တွဲဖက်ထားသည့်ပုံ တွင် ဘင်္ဂါလီ...
အစား အစာနှင့် လူနေမှု စရိုက် ပြောင်းလဲ လာမှုကြောင့် ယခုခေတ် လူကြီးပိုင်း တွင်သာမက လူငယ် များတွင် ပါ ရောဂါ မျိုးစုံ ဖြစ်ပွားလျက် ရှိသည်...
ဖုန်းအတွှက် APK ဒီမှာဒေါင်းပါ
မောင်၇ဲလတ်. Theme images by simonox. Powered by Blogger.